Vatongi 9 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Genesisi Eksodho Revhitiko Numeri Dheuteronomio Joshua Vatongi Rute 1 Samueri 2 Samueri 1 Madzimambo 2 Madzimambo 1 Makoronike 2 Makoronike Ezra Nehemiya Esteri Jobho Mapisarema Zvirevo Muparidzi Rwiyo rwaSoromoni Isaya Jeremiya Mariro Ezekieri Dhanieri Hosiya Joeri Amosi Obhadhiya Jona Mika Nahumi Habhakuki Zefaniya Hagai Zekariya Maraki Mateu Mako Ruka Johani Mabasa VaRoma 1 VaKorinde 2 VaKorinde VaGaratiya VaEfeso VaFiripi VaKorose 1 VaTesaronika 2 VaTesaronika 1 Timoti 2 Timoti Tito Firimoni VaHebheru Jakobho 1 Petro 2 Petro 1 Johani 2 Johani 3 Johani Judha Zvakazarurwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9 Kwapera nguva yakati, Abhimereki+ mwanakomana waJerubhaari akaenda kuShekemu+ kuhanzvadzi dzaamai vake, akatanga kutaura nadzo uye nemhuri yose yeimba yababa vaamai vake, achiti: 2 “Ndapota, taurai varidzi venyika yeShekemu vose vachinzwa, muti, ‘Ndezvipi zviri nani kwamuri, kuti varume makumi manomwe,+ vanakomana vaJerubhaari vose, vakutongei kana kuti murume mumwe chete akutongei? Yeukai kuti ndiri pfupa renyu nenyama yenyu.’”+ 3 Naizvozvo hanzvadzi dzaamai vake dzakatanga kutaura mashoko aya ose pamusoro pake varidzi venyika yeShekemu vose vachinzwa zvokuti mwoyo yavo yakaenda kuna Abhimereki,+ nokuti vakati: “Ihama yedu.”+ 4 Vakabva vamupa masirivha makumi manomwe akabva muimba yaBhaari-bheriti,+ Abhimereki akaashandisa kubhadhara varume vaiva vasina zvokuita uye vaivirima,+ kuti vamuperekedze. 5 Pashure paizvozvo akaenda kuimba yababa vake kuOfra,+ akauraya vana vababa vake,+ vanakomana vaJerubhaari, varume makumi manomwe, padombo rimwe chete, asi Jotamu mwanakomana wegotwe waJerubhaari akasara, nokuti akanga avanda. 6 Pashure penguva yakati, varidzi venyika yeShekemu vose neimba yose yaMiro+ vakaungana, vakaenda, vakaita kuti Abhimereki atonge ari mambo,+ pedyo nomuti mukuru,+ mbiru yaiva muShekemu.+ 7 Pavakazviudza Jotamu akabva aenda, akamira pamusoro peGomo reGerizimu,+ akadanidzira uye akashevedzera akati kwavari: “Nditeererei, imi varidzi venyika yeShekemu, uye Mwari ngaakuteererei: 8 “Pane imwe nguva miti yakaenda kunozodza mambo wayo. Naizvozvo yakati kumuorivhi,+ ‘Iva mambo wedu.’+ 9 Asi muorivhi wakati kwairi, ‘Ndingarega mafuta angu avanokudza nawo+ Mwari nevanhu, uye ndingaenda kunopeperekera mimwe miti here?’+ 10 Miti yakabva yati kumuonde,+ ‘Uya iwe, iva mambokadzi wedu.’ 11 Asi muonde wakati kwairi, ‘Ndingarega kutapira kwangu nezvibereko zvangu zvakanaka, uye ndingaenda kunopeperekera mimwe miti here?’+ 12 Ipapo miti yakati kumuzambiringa, ‘Uya iwe, iva mambokadzi wedu.’ 13 Muzambiringa ukatiwo kwairi, ‘Ndingarega waini yangu itsva inoita kuti Mwari nevanhu vafare,+ uye ndingaenda kunopeperekera miti here?’ 14 Mimwe miti yose yakazoti kurukato,+ ‘Uya iwe, iva mambo wedu.’ 15 Rukato rwakati kumiti yacho, ‘Chokwadi kana muri kundizodza kuti ndive mambo wenyu, uyai, tizirai pasi pomumvuri wangu.+ Asi kana musiri, moto+ ngaubude murukato upise misidhari+ yokuRebhanoni.’+ 16 “Zvino kana makaita nechokwadi nokusava nemhosva uye makaita Abhimereki mambo,+ kana zvamakaitira Jerubhaari neimba yake zvakanaka, uye kana makamuitira zvakafanira zvakaitwa nemaoko ake, 17 baba vangu pavakakurwirai+ vakaisa mweya wavo pangozi+ kuti vakununurei muruoko rwaMidhiyani;+ 18 asi imi mamukira imba yababa vangu nhasi kuti muuraye vanakomana vavo,+ varume makumi manomwe,+ padombo rimwe chete, uye kuti muite Abhimereki, mwanakomana womurandasikana wavo,+ mambo+ wevaridzi venyika yeShekemu nokuti ihama yenyu; 19 chokwadi, kana nhasi maitira Jerubhaari neimba yake nechokwadi uye nokururama, farirai Abhimereki uye iyewo ngaakufarirei.+ 20 Asi kana zvisina kudaro, moto+ ngaubude muna Abhimereki upise varidzi venyika yeShekemu neimba yaMiro,+ uye moto+ ngaubude muvaridzi venyika yeShekemu nomuimba yaMiro upise Abhimereki.”+ 21 Jotamu+ akabva atiza Abhimereki mukoma wake, akamhanya achienda kuBheeri, akagara ikoko. 22 Zvino Abhimereki akaramba ari muchinda waIsraeri kwemakore matatu.+ 23 Mwari akabva aita kuti pave nomudzimu wakaipa+ pakati paAbhimereki nevaridzi venyika yeShekemu, varidzi venyika yeShekemu vakanyengera+ Abhimereki, 24 kuti chisimba chakaitirwa vanakomana vaJerubhaari makumi manomwe chiuye+ uye kuti aise ropa ravo pamusoro paAbhimereki mwana wababa vavo nokuti akavauraya,+ uye pavaridzi venyika yeShekemu nokuti vakasimbisa maoko+ ake kuti auraye vana vababa vake. 25 Naizvozvo varidzi venyika yeShekemu vakaisa vanhu vaimuvandira pamusoro pemakomo, uye vaibira vanhu vose vaipfuura nepavaiva mumugwagwa. Kwapera nguva yakati, Abhimereki akazviudzwa. 26 Gaari+ mwanakomana waEbhedhi nehama dzake vakabva vauya vakaenda kuShekemu,+ varidzi venyika yeShekemu vakatanga kuvimba naye.+ 27 Vakabuda vakapinda mumunda senguva dzose, vakakohwa mazambiringa eminda yavo yemizambiringa vakaatsika, vakaita mutambo wokupembera nomufaro,+ vachibva vazopinda muimba yamwari wavo+ vakadya, vakanwa,+ vakatuka+ Abhimereki. 28 Zvino Gaari mwanakomana waEbhedhi akati: “Abhimereki ndiani,+ naShekemu ndiani kuti timushandire? Haasi mwanakomana waJerubhaari,+ uye Zebhuri+ haasi mumiririri wake here? Shandirai varume vaHamori,+ baba vaShekemu, imi vamwe, asi nei isu tichifanira kumushandira? 29 Kudai chete vanhu ava vaiva muruoko rwangu!+ Ipapo ndaizobvisa Abhimereki.” Akati kuna Abhimereki: “Wanza uto rako ubude.”+ 30 Zvino Zebhuri muchinda weguta akanzwa mashoko aGaari mwanakomana waEbhedhi.+ Akabva atsamwa kwazvo. 31 Naizvozvo akatuma nhume nounyengeri kuna Abhimereki, achiti: “Tarira! Gaari mwanakomana waEbhedhi nehama dzake zvino vasvika kuShekemu,+ uye tarira vari kuunganidza guta kuti varwe newe. 32 Zvino muka usiku,+ iwe nevanhu vauinavo, uvandire+ uri kusango. 33 Mangwanani zuva parinongobuda ukurumidze kusimuka, urwise guta; uye iye nevanhu vaainavo pavanenge vachibuda kuzokurwisa, umuitirewo zvinogona kuitwa noruoko rwako.” 34 Naizvozvo Abhimereki nevanhu vose vaaiva navo vakamuka usiku, vakatanga kuvandira Shekemu vari mapoka mana. 35 Gare gare Gaari+ mwanakomana waEbhedhi akabuda, akamira pagedhi reguta. Abhimereki nevanhu vaaiva navo vakabva vasimuka munzvimbo yokuvandira. 36 Gaari paakaona vanhu vacho, akabva ati kuna Zebhuri: “Tarira! Kune vanhu vari kuburuka vachibva pamusoro pemakomo.” Asi Zebhuri akati kwaari: “Uri kuona mimvuri yemakomo sevanhu.”+ 37 Gare gare Gaari akataurazve akati: “Tarira! Kune vanhu vari kuburuka vachibva pakati penyika, uye rimwe boka riri kuuya nenzira yokumuti mukuru weMeonenimu.” 38 Zebhuri akati kwaari: “Zvino shoko rako riya rawakataura riripi+ uchiti, ‘Abhimereki ndiani kuti timushandire?’+ Ava havasi ivo vanhu vawakaramba here?+ Ndapota, zvino buda urwe navo.” 39 Naizvozvo Gaari akabuda pamberi pevaridzi venyika yeShekemu, akarwa naAbhimereki. 40 Abhimereki akamudzingirira, iye akamutiza; uye vaiurayiwa vakaramba vachiwa vari vazhinjizhinji kusvika panopindwa napo pagedhi. 41 Zvino Abhimereki akaramba achigara muAruma, uye Zebhuri+ akadzinga Gaari+ nehama dzake kuti dzisagara muShekemu.+ 42 Zuva rakatevera racho vanhu vakatanga kubuda vachienda kusango. Naizvozvo vakaudza Abhimereki.+ 43 Nokudaro akatora vanhu, akavakamura kuva mapoka matatu,+ akatanga kuvandira ari kusango. Akabva atarira, uye nechekoko vanhu vaibuda muguta. Zvino akasimuka akavarwisa, akavauraya. 44 Abhimereki nemapoka aaiva nawo vakamhanya kuti vamire pagedhi reguta, mapoka maviri paakanga achimhanyira vose vaiva kusango, vakavauraya.+ 45 Abhimereki akarwa neguta racho zuva iroro rose, akatora guta racho; akauraya vanhu vaiva mariri,+ pashure akakoromora guta,+ akarimwaya munyu.+ 46 Varidzi venyika vose veshongwe yeShekemu pavakazvinzwa, vakabva vaenda kudura repasi reimba yaEri-bheriti.+ 47 Abhimereki akabva audzwa kuti varidzi venyika vose veshongwe yeShekemu vakanga vaungana. 48 Abhimereki akakwira muGomo reZarimoni,+ iye nevanhu vose vaaiva navo. Zvino Abhimereki akatora demo noruoko rwake, akatema bazi romuti, akarisimudza, akariisa papfudzi rake, akati kuvanhu vaaiva navo: “Kurumidzai, itai sezvamaona ndichiita!”+ 49 Naizvozvo vanhu vose vakatemawo mumwe nomumwe bazi rake, vakatevera Abhimereki. Vakabva vaaisa padura repasi, vakavapisira mudura repasi, zvokuti varume vose veshongwe yeShekemu vakafawo, varume nevakadzi vanenge chiuru.+ 50 Zvino Abhimereki akaenda kuTebhezi+ kunodzika musasa paTebhezi nokuritora. 51 Sezvo shongwe yakasimba yakanga iri pakati peguta, varume nevakadzi vose nevaridzi vose venyika veguta racho vakatizira imomo, vachibva vazozvivharira vakakwira pamusoro pedenga reshongwe. 52 Abhimereki akaenda kushongwe, akatanga kurwa nayo, akakwira pedyo nesuo reshongwe kuti aipise nomoto.+ 53 Mumwe mukadzi akabva akanda huyo pamusoro waAbhimereki akaputsa dehenya rake.+ 54 Naizvozvo akakurumidza kushevedza mushandi akanga akatakura zvombo zvake akati kwaari: “Vhomora bakatwa rako undiuraye,+ kuti vasati nezvangu, ‘Akaurayiwa nomukadzi.’” Mushandi wake akabva amubaya, zvokuti akafa.+ 55 Varume vaIsraeri pavakaona kuti Abhimereki akanga afa, vakaenda mumwe nomumwe kunzvimbo yake. 56 Nokudaro Mwari akaita kuti zvakaipa zvaAbhimereki zvaakanga aitira baba vake nokuuraya vana vababa vake makumi manomwe zvidzoke.+ 57 Mwari akadzosa zvakaipa zvose zvevarume veShekemu pamisoro yavo, kuti kutuka+ kwaJotamu+ mwanakomana waJerubhaari+ kuuye pavari.+